FAQs - GUANGDONG PENGWEI FIICAN CHEMICAL CO., LTD
Qiimahayadu waa isbedeli karaan iyadoo ku xiran sahayda iyo arrimaha kale ee suuqa. Waxaan kuu soo diri doonaa liiska qiimaha la cusboonaysiiyay ka dib markii shirkaddaadu nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
Waa maxay noocyada hababka lacag-bixinta aad aqbasho?
Waxaad ku bixin kartaa lacag bixinta akoonkeena bangiga, T/T, L/C, 30% dhigaal hore, 70% dheelitirka ka dhanka ah sawirka B/L. Waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa macluumaadka faahfaahsan ee lacag bixinta.